Vanhukadzi Vakawanda Vanoda Kuti Vaenzane Huwandu neVanhurume Muparamende
Gumiguru 18, 2018
Lawmaker Priscilla Misihairabwi-Mushonga wants Zimbabwe's parliamentary sessions should be held outside the chamber because the facility is too small to house all the country's members of parliament, Oct. 23, 2013. (Sebastian Mhofu for VOA)
Vamwe vanhukadzi vari mune zvematongerwo enyika, vemasangano akazvimirira ega, nevamwe vanhuwo zvavo vanoti mutemo weProportional Representation unofanirwa kuvandudzwa senzira yekubatsira kuti kuve nemadzimai akawanda anopinda muzvinzvimbo zvematongerwo enyika.
Pfungwa idzi dzabuda pazuva rechipiri remusangano weZimbabwe Gender Forum wange uchiitwa neZimbabwe Gender Commission muBulawayo.
Vanhu vakawanda vange vari pamusangano uyu vabvumirana kuti bumbiro remitemo yenyika rakajeka pakuti kunofanirwa kuve nekuenzaniswa kwemikana muzvikamu zvakasiyana siyana, vachiti panofanirwa kuve nemitemo inokomekedza vemapato ezvematongerwo enyika kuti atevedzerewo izvi.
Sachigaro webazi remadzimai mubato reMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa, Amai Lynette Karenyi Kore, vaudza Studio7 kuti vanobvumirana nenyaya yekuti kuve nemitemo inobatsira kuenzaniswa kwemikana.
Asi vati mafungiro avo ndeekuti pane kuti mutemo weproportional representation unzi urambe uripo, vanoda kuti kuve nemutemo unoita kuti muparamende muve nezvikamu zvakaenzana zvevanhurume nevanhukadzi.
Kana zvinhu zvikasachinja, mutemo weproportional representation uyo unopa zvigaro makumi matanhatu zvemudare reparamende kuvanhukadzi, uchange usisashande panosvika gore ra2023.
Amai Priscilla Misihairabwi-Mushonga vanove nhengo yeparamende muchikamu cheproportional representation pasi pebato reMDC T inotungamirwa naMuzvare Thokozani Khupe, vati vanobvumiranawo nemaonero ekuti mitemo ivandudzwe asi vati zvakakosha kuti vanhukadzi vave nemafungiro matsva panyaya yekuenzaniswa kwemikana vachiti ivo pachavo havatsigirane zvakakwana.
Nhengo yeparamende muchikamu cheproportional representation muZanu PF, Amai Alginia Samson Mhlanga, vati vanotsigirawo kuve nemitemo yakajeka inotsigira kuenzaniswa kwemikana vachiti kana mutemo weproportional representation ukabviswa izvi zvinogona kudzorera kumashure kuenzaniswa kwemikana.
Vamwe vatiwo zvakakosha kuti vanhukadzi, kunyanya vechidiki vanoda kupinda mune zvematongerwo enyika, vawane rutsigiro kubva kune vanhukadzi vechikuru.
Asi Zandile Ncube mumwe wevechidiki ange ari pamusangano uyu ati haawone vanhukadzi vechikuru vachikwanisa kubatsira vechidiki achiti anotarisira kuti vemasangano anoshanda akazvimirira ega abatsire panyaya iyi.
Sachigaro weZimbabwe Gender Commission, Amai Margaret Sangarwe-Mukahanana, vaudza Studio 7 kuti chimwe chezvinangwa zvemusangano wavo kuzeya nyaya yekushomeka kwevanhukadzi vakakwanisa kubudirira kuve makanzura kana vamiriri veparamende nedonzvo rekutsvaga mazano ekuti dambudziko rekusaenzana kwemikana rogadziriswa sei.
Aka ndekechipiri Zimbabwe Gender Commission ichiita musangano wakadai, uye musangano wekutanga wakaitwa gore rapera muHarare.